ကူးပြောင်းခြင်းနှုန်း Optimization: တိုးမြှင့်ကူးပြောင်းနှုန်းထားများမှ 9- အဆင့်လမ်းညွှန် | Martech Zone
စျေးကွက်သမားများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာခဏစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအသစ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်အချိန်ဖြုန်းနေကြရသည်၊ သို့သော်အွန်လိုင်းပေါ်မှကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိလှုပ်ရှားမှုများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကြိုးပမ်းနေသည့်မှန်ထဲကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်အမြဲတမ်းကောင်းသောအလုပ်မလုပ်ပါ။ ဤအရာအချို့သည်၎င်းသည်အလွန်တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်ပုံရသည်။ သင်မည်သည့်နေရာမှစတင်မည်နည်း။ ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား (CRO)? ကောင်းပြီဟုတ်တယ် ... ရှိတယ်
မှာအသင်း ကူးပြောင်းနှုန်းနှုန်းကျွမ်းကျင်သူများ သူတို့မျှဝေသောသူတို့၏ကိုယ်ပိုင် CRE နည်းစနစ်များရှိသည် ဒီ infographic သူတို့ KISSmetrics မှာအဖွဲ့နဲ့အတူတူထားခဲ့တယ်။ အချက်အလက်များသည်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းထားများကိုအဆင့် ၉ ဆင့်ဖော်ပြသည်။
အဆိုပါဂိမ်း၏စည်းကမ်းချက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန် - သင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု CRO မဟာဗျူဟာ, ရေရှည်ရည်မှန်းချက်များနှင့်သင်အောင်မြင်မှုတိုင်းတာပါလိမ့်မယ်ဘယ်လို။ သင်၏ visitors ည့်သည်များကိုစိတ်ထဲတွင်စတင်ပြီးဖောက်သည်တစ် ဦး အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်၎င်းတို့ပြုလုပ်ရမည့်အဆင့်များအကြောင်းကိုလျှောက်လှမ်းပါ။ ယူဆချက်မချပါနဲ့!
ရှိပြီးသားအသွားအလာရင်းမြစ်များကိုနားလည်ပြီးညှိပါ - သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂုဏ်သတ္တိများကိုမျက်လုံးကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင့်စိတ်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ရောင်းအားကတော့၊ visitors ည့်သည်များမည်သည့်နေရာမှရောက်လာသည်၊ မည်သည့်စာမျက်နှာများကိုသူတို့ရောက်လာသည်နှင့်သင့် site ကိုသူတို့ဘယ်လိုသွားနေတယ်ဆိုတာ။ တိုးတက်မှုအတွက်အကြီးမားဆုံးသောအခွင့်အလမ်းများရှိသောနေရာများကိုဖော်ထုတ်ပါ။
သင်၏ Vis ည့်သည်များကိုနားလည်ခြင်း (အထူးသဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော) - မခန့်မှန်းပါနှင့် - သင်၏ visitors ည့်သည်များသည်ကွဲပြားခြားနားသော visit ည့်သည်အမျိုးအစားများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုနားလည်ခြင်း၊ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် visitors ည့်သည်များ၏ကန့်ကွက်ခြင်းများကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်နားလည်ခြင်းအားဖြင့်ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုသည်ကိုရှာဖွေပါ။
သင်၏စျေးကွက်ကိုလေ့လာပါ - သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၊ သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူနှင့်သင်၏ဖောက်သည်များကဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဆိုဒ်များကိုလေ့လာပါ။ ထို့နောက်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အားသာချက်များကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏တည်နေရာကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုရှာဖွေပါ။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ဝှက်ထားသောကြွယ်ဝမှုကိုဖော်ထုတ်ပါ - ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏မည်သည့်ကဏ္aspectsများကိုဆွဲဆောင်နိုင်မည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ၊ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင်ထိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ပြခြင်းနှင့်ထိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရယူခြင်း၊
သင်၏စမ်းသပ်နည်းဗျူဟာကိုဖန်တီးပါ - သင်၏သုတေသနမှသင်ရရှိသောအတွေးအခေါ်များအားလုံးကိုယူပြီးသင်၏စီးပွားရေးကိုအတိုဆုံးအချိန်တွင်ကြီးထွားစေမည့်ကြီးမားပြီးရဲရင့်သောပစ်မှတ်ထားသောအရာများကို ဦး စားပေးရွေးချယ်ပါ။ ရဲရင့်သောအပြောင်းအလဲများသည်သင့်အားအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိစေသည်။
သင်၏စမ်းသပ်စာမျက်နှာများကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ - ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်သော၊ ယုံကြည်ရလွယ်ကူသောနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံသစ်၏ဒီဇိုင်းနှင့်ကိုယ်ထည်ဘောင်။ wireframe တွင်အသုံး ၀ င်သောစမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ပြီးသင်၏ဖောက်သည်များအားစာနာနားလည်မှုရှိသူနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
သင်၏ဝဘ်ဆိုက်တွင်စမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ပါ - သင်၏စမ်းသပ်ချက်များ၌ A / B စစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ပါ။ အသင်း ၀ င်အားလုံးစာမေးပွဲသည်မည်သည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်ဘာကြောင့်၎င်းကိုလုပ်သည်၊ ဆိုက်နှင့်မည်သို့လိုက်ဖက်ကြောင်း၊ စီးပွားရေးပန်းတိုင်များနှင့်မည်သို့ကိုက်ညီသည်၊ အောင်မြင်မှုကိုမည်သို့တိုင်းတာမည်ကိုနားလည်စေရန်သေချာသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာပါ။ A / B စစ်ဆေးခြင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်စာရင်းအင်းတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူမည်သည့်ဗားရှင်းသည် ပိုမို၍ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေသည်ကိုတွက်ချက်နိုင်သည်။
သင်၏အနိုင်ရရှိရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုအခြားမီဒီယာသို့လွှဲပြောင်းပါ - သင်၏အောင်မြင်သောစမ်းသပ်မှုများမှထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုသင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်မည်သို့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်ကိုလေ့လာပါ။ ခေါင်းစဉ်များကိုမျှဝေနိုင်သည်၊ အွန်လိုင်းအနိုင်ရရှိမှုများကိုအော့ဖ်လိုင်းမီဒီယာအတွက်အဆင်ပြေစေပြီးသင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားစကားလုံးကိုဖြန့်ဝေနိုင်သည်။
Kissmetrics သည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကိုလွယ်ကူစွာဖတ်နိုင်သောအစီရင်ခံစာများနှင့်ဖော်ရွေသောသုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်များဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်တစ်နေရာတည်းတွင်ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့် Customer Engagement Automation (CEA) ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေသည်။
တစ် ဦး Kissmetrics သရုပ်ပြတောင်းဆို
Tags: ပြောင်းလဲခြင်း optimizationကူးပြောင်းမှုနှုန်းကျွမ်းကျင်သူများကူးပြောင်းမှုနှုန်း optimizationကူးပြောင်းမှုနှုန်း optimization ခြေလှမ်းများကူးပြောင်းမှုနှုန်း optimization မဟာဗျူဟာCre နည်းစနစ်croCro မဟာဗျူဟာပန်းချီဆရာ
ဧပြီ 17, 2021 မှာ 3: 23 AM
ကောင်းမွန်သောပို့စ်။ အထက်ဖော်ပြပါ ကိုးဆင့်လမ်းညွှန်သည် သင့်အား ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာ၏ ဒြပ်စင်တစ်ခုစီကို ဘောင်ခတ်ရန် အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခု ပေးသင့်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပြောင်းလဲခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။